မာရိ၏အစဉ်အအပျိုစင် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / Church ကို / မာရိသညျ / မာရိ၏အစဉ်အအပျိုစင်
ရိုးရှင်းသောအဖြေဖြစ်ပါသည်: ကက်သလစ်ကြောင့်စစ်မှန်တဲ့စျသောကွောငျ့, မာရိသူမ၏တစ်သက်တာတစ်လျှောက်လုံးတစ်ကညာကျန်ရစ်ယုံကြည်. ဒါဟာရာတှငျသတိ ပေး. ခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်ကြွေးကြော်နေတဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်, “သမ္မာတရားကိုတိုင်များနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်” (ပေါလုရဲ့ကြည့်ရှု တိမောသေဖို့ပထမဦးစွာပေးစာ 3:15); မြင့်မြတ်သောထုံးတမျးစဉျလာအားဖြင့်ထင်ရှား; နှင့်မြင့်မြတ်သောသမ္မာကျမ်းစာ၌နှင့်အတူ agreeance အတွက် (ပေါလုရဲ့ကြည့်ရှု သက်သာလောနိတ်မြို့သားဒုတိယပေးစာ 2:15).
ဒါကြောင့်, ကက်သလစ်ထိုကြောင့်ယုံကြည် “သခင်ဘုရား၏ညီအစျမ” အနီး-ဆက်ဆံရေးယေရှု၏ကျမ်းစာထဲမှာရှိကြ၏ဖော်ပြခဲ့တဲ့, ဒါပေမဲ့မမောင်နှမ (ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အဖြစ်).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ဆုံးနဲ့သိသိသာသာ, မာရိရဲ့ထာဝရအပျိုစင်ကြောင့်ယေရှုအကြောင်းခိုင်မာသွားရာ၏ခရစ်ယာန်ဘာသာမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်. နောက်ဆုံးမှာ, ခရစ်တော်၏သန့်ရှင်းသောတန်ဆာနှင့်လူ့ဇာတိ၏ထူးခြားမှုဤယုံကြည်ချက်အချက်များ: ဘုရားသခင်၏လုပ်ရပ်သည်လူဖြစ်လာ.
ထိုပရောဖက်ယေဇကျေလမင်းသားအဖြစ်ကြေညာ “ထွက်သွားရကြမည်, သူထွက်သွားပြီပြီးနောက်နှင့်တံခါးကိုပိတ်ထားခံရကြလိမ့်မည်” (ကြည့်ရှု ယေဇကျေလ 46:12), နှင့်ဘုရားကျောင်းကဒီခရစ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းနှင့်မာရိရဲ့ရာသက်ပန်အပျိုစင်တစ်ဦးကိုကိုးကားဖြစ်နားလည်နိုင် (စိန့် Ambrose မြင်, တစ်ကညာ၏အရာ၌ခန့်ထား 8:52). ဒါကြောင့်, ထိုသို့ဆိုသောကြောင့်သူဟာသူသည်မာရိသညျယရှေု၏ဘွားမြင်သောနောက်သူမ၏အပျိုစင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မယ်လို့သင့်လျော်ခဲ့: လူ့ form မှာဘုရားသခငျသညျ!
ကျမ်းစာ, တစ်မောရှေနှင့်မီးလောခြုံ၏ဇာတ်လမ်းအပျေါမှာရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ,. မောရှေသည်ချုံချဉ်းကပ်အဖြစ်, သခင်ဘုရားကဆိုသည်, “ချဉ်းကပ်မနေပါနဲ့; သင်၏ခြေမှသင်၏ဖိနပ်ကိုချွတ်ပယ်, သငျသညျရပ်နေသည့်အပေါ်အရပျကိုသန့်ရှင်းသောမြေပြင်သည်” (ထှကျမွောကျရာ 3:5).
ပထမဦးဆုံး, ကျနော်တို့သခင်၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိဆင်းသက်တော်မူသောကြောင့်, မြေပြင်ကိုသန့်ရှင်းစေခဲ့သည်သိမြင်. ငါတို့သည်ဤတူညီတဲ့ဘုရားသခင်မေ့လျော့တော်မနေသင့်, သူကိုမီးလောင်ခြုံ၌မောရှေအားထငျရှား, မာရိ၏ဝမ်း၌ပဋိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ်.
ဒါကြောင့်, ကသာသူမဆိုသင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်, အတွက်သောသန့်ရှင်းသောမြေပြင်နဲ့တူ ထှကျမွောကျရာ, သန့်ရှင်းစေခံရဖို့လိုအပ်, အထူးသကိုပြင်ဆင်, ကြောင်း, မင်းရှင်ဘုရင်ဘုရင်နှင့်သခင်လက်ခံရရှိရန်.
ဒုတိယအချက်မှာ, အသင်းတော်အဘတို့မီးလောင်ရာခြုံအလိုလိုပုံရိပ်ကိုသည်ကိုမြင်–တစ်ချုံမီးလျှံ, သေးကိုလောင်မဟုတ်–သူမ၏အပျိုစင်ပြစ်မှားခြင်းမရှိဘဲမာရိရဲ့ပေးကမ်းကလေးမွေးဖွားတဲ့ဥပစာအဖြစ်. ဥပမာအားဖြင့်, စတုတ္ထရာစုအတွင်း, Nyssa ၏ဂရက်ဂိုရီ wrote, “အဘယ်အရာကိုခြုံ၏မီးလျှံထဲမှာအဲဒီအချိန်က prefigured ခဲ့ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးအပျိုကညာ၏နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေအတွက်ထင်ရှားခဲ့သည်. … တောင်ပေါ်မှာအဖြစ်ခြုံကိုမီးရှို့ပေမယ်ကိုလောင်မခံခဲ့ရ, ဒါကြောင့်အပျိုစင်အလင်းကိုဘွားမြင်လေ၏နဲ့ယိုယွင်းမခံခဲ့ရ” (ခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းတွင်).
အမှန်ကတော့, မာရိရဲ့ထာဝရအပျိုစင်ခရစ်တော်ဒါသန့်ရှင်းသောကြောင့်သောကမ္ဘာသို့ကြေညာ–ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်–ကိုယ်တော်ကိုသာမန်မိန်းမဝမ်း၌ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီအပ်သည်မသင့်လျော်ခဲ့ကြပေသည်; နှင့်, ထိုနည်းတူ, ဆိုးသောသူတို့ကိုယ်တော်ကိုပြီးနောက်ထိုအမိဝမ်းထဲကနေလာကြဘို့–မေရှိယကိုထမ်းမိဝမ်းအထူးပြင်ဆင်ထား. နောက်တဖန်အ, ယေဇကျေလကိုစဉ်းစား, “[မင်းသား] ထွက်သွားရကြမည်, သူထွက်သွားပြီပြီးနောက်နှင့်တံခါးကိုပိတ်ထားခံရကြလိမ့်မည်။”
သခင်ဘုရားကိုဖွားမြင်၏ထိုအချိန်ကမာရိရဲ့အပျိုစင်ပရောဖက်ဟေရှာယအားဖြင့်ညွှန်ပြနေသည်, အဘယ်သူသည်ကဤသို့ဆို၏, “အကယ်, တစ်ကညာတစ်သားပဋိသန္ဓေ ယူ. နှင့်ဆောင်ရမည်, နှင့်ဧမာနွေလသူ၏နာမကိုပဌနာရကြလိမ့်မည်” (7:14; ကြည့်ရှု မဿဲ 1:23 နှင့် လုကာ 1:27). ကျဟရှောယ, နောက်ဆုံးတော့, ထင်သူမ၏အပျိုစင်ခိုင်မာသွား နှင့် သည်းခံခြင်းအတွက်. ထို့အပြင်. မာရိရဲ့တုန့်ပြန်, ထိုကောငျးကငျတရဲ့ကြေညာချက်ကိုမှသူမတစ်ဦးသည်သားတော်ကိုပဋိသန္ဓေ ယူ. ဘှားမယ်လို့–“ငါသည်လူမသိရပါဘူးကတည်းကယင်းကိုမည်သို့ရှိနိုင်ပါသည်?” (လုကာ 1:34)–ရှင်းလင်းစွာသူမတစ်ဦးကညာခဲ့ကြောင်းအကြံပြု. သူမရဲ့တုံ့ပြန်မှုခဲမဟုတ်ရင်သဘာဝကျပါတယ်.
သူမ၏အစဉ်စွဲလမ်း Virgin ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလိုသည် ရှောလမုန်မင်း၏သီချင်း, သောကပြောပါတယ်, “သော့ခတ်တစ်ဦးကဥယျာဉ်ကိုငါ့နှမဖြစ်ပါသည်, ငါ့ခင်ပွန်း, တံဆိပ်ခတ်တဲ့စမ်းရေတွင်း၌” (4:12).
ဘယ်လိုကြှနျုပျတို့သညျဤနားလည်သဘောပေါက်ရန်သူမနှင့်ယောသပ်အကြင်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေးထားကြသည်? မာရိသညျနို့စို့အရွယ်ကနေသန့်ရှင်းသောကညာသည်အတိုင်းထာဝရဘုရားအားဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့ကွောငျးရရှိထားသူသည့်ရှေးဟောင်းအစဉ်အလာရှိပါတယ်; သူမအသက်လာသောအခါယောသပ်အားအပ်နှင်းခဲ့သည်, သူမထက်အများကြီးအသက်ကြီးလာတဲ့မုဆိုးဖို (cf. ဂျိမ်း၏ Protoevangelium).
အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတှငျးရှိ chastity ၏အယူအဆသည်, တကယ်ပါပဲ, တစ်ဦးသမ္မာကျမ်းအယူအဆ. ဥပမာအားဖြင့်, ရာဇဝငျမြား၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်အတွက် 1:4, ဒါဝိဒ်ဘုရင်တစ်ဦးသမီးကညာကြာ, အဘိ, သူ၏ဇနီးဖြစ်သူ၏အသက်ကြီးသူ့ကိုဂရုစိုကျဖို့, ဒါပေမဲ့သူမနှင့်ဆက်ဆံရေးမှရှောင်ကြဉ်.
ထို့အပြင်, ကောရိန္တုပြည်သားအားမိမိပထမဦးစွာပေးစာထဲမှာ, ပေါလုကလက်ခံနိုင်သောသူတို့အားသန့်ရှင်းစေခုတော့သို့မဟုတ်အစဉ်အမြဲလက်ထပ်ပြီးသော်လည်းတစ်ပြည်နယ်အကြံပြု (ကြည့်ရှု 7:37-38).
ရှင်းနေသည်မှာ, ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုထမ်းသူမ၏ခေါ်သံ၏အလငျး၌, ယောသပ်အားမာရိရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုသာမန်ဝေးခဲ့. ဒါဟာဗာဂျင်းနှင့်သူမ၏သားတျော၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတှကျဘုရားသခငျသဖြင့်စီရင်ခဲ့သည်–တစ်ဦးသည်အချိန်လောကဝှက်ထားလျက်ရှိသောလူ့ဇာတိကိုစောင့်ရှောက်ရန်. “မာရိ၏အပျိုစင်, သူမ၏ပေးကမျးကလေးမွေးဖွား, နှင့်လည်းသခင်ဘုရားအသေခံ, ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်း မှစ. ပုန်းရှောင်ခဲ့ကြ,” အန္တိအုတ်မြို့သို့၏ Ignatius wrote, တမန်တော်ယောဟန်၏တပည့်တစ်ဦး, အကြောင်းနှစ်တွင် 107: “–သုံးနက်နဲသောအရာကျယ်လောင်စွာကြွေးကြော်သူ, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်၏တိတ်ဆိတ်စွာကိုပြု” (ဧဖက်မှပေးစာ 19:1).
တွင် မဿဲ 1:19, သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာ၌ Jospeh ခဲ့သည်ကိုဖျောပွ “တစ်ရုံလူကို။” ထို့ကြောင့်, မာရိသကြားပြီးလျှင်အခြားအားဖြင့်ကလေးတစ်ဦးပဋိသန္ဓေယူခဲ့, သူသည်မောရှေပညတ်အောက်မှာဖြစ်နိုင်ခြေကွပ်မျက်မှသူမ၏ကယ်ဖို့တိတ်တဆိတ်သူမ၏ပယ်ရှားရန်ပြေလည် (နှုန်းအဖြစ် တရားဟောရာ 22:23-24).
သခင်ဘုရားကိုကြားဝင်, သော်လည်း, အိပ်မက်၌ကောငျးကငျတမနျအားဖြင့်သူ့ကိုပြောပြ, “မာရိကသင်၏မယားကိုယူမကွောကျပါနဲ့, သည်သူမ၏အတွက်ပဋိသန္ဓေယူသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏; သူမသားကိုဘွားလိမ့်မည်, သငျတို့သညျသူ၏နာမကိုယရှေုသညျ ဟူ. ခေါ်ရမည်, ထိုသူတို့၏အပွစျမြားမှမိမိလူတို့ကိုကယ်တင်မည်များအတွက်” (မဿဲ 1:20).
ယောသပ်ကိုဆိုလိုဤစကားလုံးတို့ကိုယူကြပြီမဟုတ်ပေ, သော်လည်း, မာရိသည်နှုတ်ကပတ်တရား၏သာမန်သဘောအရသူ၏ဇနီးဖြစ်ကြောင်းကို. မီလန်၏စိန့် Ambrose wrote အဖြစ်,
“ဒါကြောင့်ကျမ်းစာ၌ကပြောပါတယ်ဆိုခြားနားချက်ကိုလုပ်တတ်ကိုမတည်မ: '' ယောသပ်သည်သူ၏ဇနီး ယူ. အဲဂုတ်တုပွညျသို့သှား’ (Matt. 1:24; 2:14); မည်သည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်လူမှ espoused အဘို့မယား၏နာမကိုပေးသနားသည်. ဒါဟာအိမ်ထောင်ရေးကိုအအိမ်ထောင်ရေးဝေါဟာရများအလုပ်လုပ်ကြောင်းစတင်ခဲ့သည်သောအချိန်ကနေ. ဒါဟာအိမ်ထောင်ရေးကိုကအပျိုစင်၏ deflowering မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အိမ်ထောင်ရေးစာချုပ်. မိန်းကလေးအိမ်ထောင်ရေးကစတင်ခဲ့သည်သောထမ်းဘိုးကိုလက်ခံသောအခါက, သူမကိုယ်ထိလက်ရောက်သူမ၏ခင်ပွန်းကသိမှကြွလာသောအခါ” (တစ်ကညာ၏အရာ၌ခန့်ထားနဲ့မာရိ၏ထာဝရအပျိုစင် 6:41).
သူမသညျဘုရားသခငျ၏သားတျောကိုသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျော၏သူမ၏ပထမဦးဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်ကိုဖန်ဆင်းယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ဒါက (နှုန်း လုကာ 1:35); ယောသပ်သည်အခြားများ၏အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အိမ်ထောင်ရေးဆက်ဆံရေးရှိသည်ဖို့ပညတ်တရားအောက်တွင်တားမြစ်ထားခဲ့သည်.
ပထမဦးဆုံး, ဒါကြောင့်သမ္မာကျမ်း၏တပြင်လုံးကို၏ဆက်စပ်ထဲကသမ္မာကျမ်းမှကျမ်းပိုဒ်ကို ကိုးကား. အတွက်အန္တရာယ်ရှိကွောငျးထောက်ပြသင့်ပါတယ်. ယရှေုသညျတမန်တော်ယောဟန်အားမာရိသည် entrusts ဆိုတဲ့အချက်ကို, ဥပမာအားဖြင့်, သူကအမှန်တကယ်မောင်နှမရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသည်ခိုင်ခံ့သောအရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါသည် (ကြည့်ရှု ယောဟန်သည် 19:27). မာရိကအခြားကလေးများခဲ့လျှင်, ယရှေုသညျသူ့အဘို့ဂရုစိုက်ဖို့မိသားစုအပြင်ဘက်တစ်စုံတစ်ဦးကမေးမြန်းခဲ့ရမဟုတ်ဘူး. (ဧဝံဂေလိစက်ဝိုင်းထဲမှာတချို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲရရှိမှုဒီဆန့်ကျင်တစ်ဦးငြင်းခုံသောကွောငျ့ဂျိမ်းစ်နှင့်သခင်ရဲ့အခြားသညျယရှေုကိုယောဟနျမာရိအပ်နှင်းသောအယူအဆဖြစ်ပါသည် “ညီအစ်ကိုတို့,” သေးကခရစ်ယာန်တွေမဟုတ်ကြ. သို့သော်ဤအငြင်းအခုံလောကမှာဖြစ်ပါသည်. ဒီဖြစ်ရပ်ဖြစ်လျှင်, တစျဝငျကမျြးဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုမှအချို့သောရှင်းလင်းချက်ပေးဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်. ယရှေုသညျရှင်းလင်းချက်မပါဘဲယောဟန်အားမာရိသပေးသည်ဟူသောအချက်ကိုမာရိသည်အဘယ်သူမျှမကအခြားကလေးများခဲ့ဖော်ပြသည်။)
ဘယ်လိုလဲ, ထို့နောက်, ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သောကျမ်းပိုဒ်အနက်ကိုဘော်ပြမှနေကြတယ် မဿဲ 13:55, လူအစုအဝေးမှတ်ချက်အတွက်သောလူစုကို, “ဤအရာကားလက်သမား၏သားမ? မယ်တော်မာရိနှင့်ဂျိမ်းစ်ဖြစ်ကိုမသိရ, ယောသပ်သည်, ရှိမုန်နှင့်ယုဒသည်မိမိညီအစ်ကိုတို့ကို? သူ့နှမကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းများဖြစ်ကြသည်မဟုတ်?”
ကက်သလစ်အနေအထားကဤကြောင်း “ကိုညီအစျ” နှင့် “အစ်မတွေ” ဆွေမျိုးနီးစပ်ခဲ့ကြ, ထိုကဲ့သို့သောဝမ်းကွဲအဖြစ်, ဒါပေမဲ့မမောင်နှမ, တဦးတည်းရဲ့အပေါက်ဘော်တယောက်တောင်းဆို၏ရှေးဟောင်းဂျူးထုံးစံနှင့်အတူသဘောတူ “အစ်ကို” (နှုန်း ကမ္ဘာဦးကျမ်း 13:8; 14:14; 29:15, et al ။). ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ်မဟာ wrote အဖြစ်, “မတိကျတဲ့ဝေါဟာရစကားလုံး '' ဝမ်းကွဲ '' ဖော်ပြဟီဘရူးနှင့် Aramaic ကိုအတွက်ရှိကွောငျးပြန်ပြောပြရပါမည်, နှင့်သောသက်တမ်း '' အစ်ကို’ နဲ့ 'အစ်မ’ ထို့ကြောင့်ဆက်ဆံရေးအများအပြားဒီဂရီပါဝင်သည်။”1
ထို့အပြင်, ဒါကြောင့်အခြားနေရာများတွင်၌ထင်ရှားနေသည် မဿဲ ကြောင်း “ယာကုပျနှငျ့ယောသပ်သည်” တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမာရိ၏အမှန်တကယ်သားတည်း, အဘယ်သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ခြေမှာအမြိုးသမီးမြား၏ကျန်နှင့်အတူရပ်အီစတာနံနက်ပိုင်းတွင်သင်္ချိုင်းဂူမှမာရိသဂဒလမာလိုက်ပါသွား (27:55-56; 28:1).
ဤသည်အခြားသောမာရိသည်အများအား Clopas ၏မယားဖြစ်ဟုယုံကြည်နေသည်, ယေရှု၏တစ်ဘထွေးခဲ့ကြပေမည်သူကို (ကြည့်ရှု ယောဟန်သည် 19:25; ယူစီးဘီးယပ်လည်းမြင်, အသင်းတော်များ၏သမိုင်း 3:11).2 ဒါဟာပြောနေပါတယ်, ထို့အပြင်, သခင်ဘုရား၏အကြောင်း “ညီအစ်ကိုတို့,” ဘယ်နေရာမှာအညီကျမ်းစာလာသည်ကိုမာရိ၏သားအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်, ယရှေုသညျမကြာခဏလို့ခေါ်ပါတယ်အဖြစ် (ကြည့်ရှု မဿဲ 13:55; မာကု 6:3, et al ။).
မာရိရဲ့ထာဝရအပျိုကညာပြိုင်ဘက်မကြာခဏကိုးကားနှစ်ခုအခြားဧဝံဂေလိတရားကျမ်းပိုဒ်ရှိပါတယ်: မဿဲ 1:25 နှင့် လုကာ 2:7.
မဿဲ 1:25 ကယောသပ်ကိုပြောပါတယ် “သူမသားကိုဘှားမွငျရှေ့မှာမည်သည့်အချိန်တွင်သူမ၏နှင့်မဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။” Ludwig Ott အတွက်ရှင်းပြခဲ့သည်အဖြစ် ကက်သလစ်တရားသေအယူဝါဒ၏အခြေခံ, သော်လည်း, ဤကျမ်းပိုဒ် “အခိုငျအမာပွောဆို(s ကို) အိမ်ထောင်ရေးကုန်မခံခဲ့ရကာလ၌အတိအကျမှတ်ကိုတက်, ဒါပေမယ့်မကထိုနောက်မှကုန်ခဲ့သည့်နည်းလမ်းဖြင့်” (Tan ကစာအုပ်များ, 1960, p. 207). ၏ရည်မှန်းချက် မဿဲ 1:25 ယရှေုသညျမရှိမွကွေီးဖခင်ခဲ့အတည်ပြုခဲ့, အမှန်တကယ်ဘုရားသခင်၏သားတော်. ဒါဟာယောသပ်သည်အကြောင်းကိုဘာမှအကြံပြုဖို့ရည်ရွယ်နှငျ့ယရှေုပြီးနောက်မာရိရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမခံခဲ့ရ’ ကလေးမွေးဖွား. အကိုစဉ်းစားပါ ရှမွေလသည်ဒုတိယစာအုပ် 6:23, သူက Mary သောကပြောပါတယ် “သူမ၏သေမင်း၏နေ့သားသမီးမရှိ။” သိသိသာသာ, ဒီသူမကလေးတစ်ဦးရှိခဲ့ပါတယ်မဆိုလိုပါ ပြီးနောက် သူမသေဆုံး. တွင် မဿဲ 28:20, ယရှေုသညျသူ၏နောက်လိုက်များနှင့်အတူဖြစ်ကတိပြု “အသက်၏အနီးကပ်ရန်။” နောက်တဖန်အ, ဒီသူအမှတ်ထက်ကျော်လွန်သူတို့နှင့်အတူဖြစ်ငြိမ်းလိမ့်မည်မဆိုလိုပါ.
တွင် လုကာ 2:7, ယရှေုသညျမာရိရဲ့ဟုခေါ်သည် “ပထမဦးဆုံးဖွား။” သို့သော်, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ်ကရှင်းပြခဲ့သည်အဖြစ်:
“အဆိုပါစကားလုံး '' သားဦး,’ စာသား '' နောက်ထပ်အားဖြင့်မတိုင်မီမကလေးတစ်ဦးကိုဆိုလို’ နှင့်, သူ့ဟာသူအတွက်, အခြားသားသမီးများ၏တည်ရှိမှုရန်မရည်ညွှန်းစေသည်. ထို့အပြင်, ထိုသာသနာပွုဆရာကလေး၏ဤဝိသေသအလေးပေး, ဂျူးတရားသငျ့လျြောသောအချို့သောတာဝန်ဝတ္တရားသားဦးသား၏ကလေးမွေးဖွားရန်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြပြီးကတည်းက, လွတ်လပ်စွာမိခင်အခြားကလေးများယောက်ျားကိုဘွားမြင်ပြီစေခြင်းငှါ, ဖြစ်စေ၏. သူ '' ပထမဦးဆုံးဖြစ်ဘွားစေခဲ့သောကြောင့်, ထို့ကြောင့်တိုင်းသာသားသည်ဤဆေးညွှန်းဖို့ဘာသာရပ်ခဲ့သည်’ (cf. လုကာ 2:23)” (“အဆိုပါဘုရားကျောင်း '' အစဉ်အဆက်ကညာ '' အဖြစ်မာရိသည် Presents”)
မိုက်ကယ် O'Carroll, ထို့အပြင်, အစီရင်ခံ, “အဲဂုတ္တုပြည်၌ဂျူးသင်္ချိုင်းကမ္ပည်း, ပထမရာစုမှစတွဲ, … စိန့်ပေါ်အခြေခံပြီးမာရိရဲ့အစဉ်အအပျိုစင်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖြေဆိုကူညီပေးသည်. နှုတ်ကပတ်တော် '' ၏လုရဲ့အသုံးပထမဦးဆုံးဖွား’ (prototokos) (2:7). နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြားကလေးများဆိုလိုဘဲသူမ၏ပထမဦးဆုံးသူငယ်၏ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်သေဆုံးသွားသူကိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုဖော်ပြရန်ဤကိစ္စတွင်၎င်း၏အသုံးပြုပြသကြောင်း, သိသာကိုအခြားသူများခဲ့ကြပါဘူးတဲ့သူ” (Theotokos: အမင်္ဂလာရှိ၏ကညာမာရိ၏တစ်ဦး Theological စွယ်စုံကျမ်း, မိုက်ကယ် Glazier, 1982, p. 49).
မာရိရဲ့ထာဝရအပျိုစင်ကျော်အငြင်းပွားမှုအတွက်နှစ်ဖက်စလုံးကတည်းက, လိုလားသူများနှင့်အတူ, သူတို့ရဲ့အနေအထားကိုထောကျပံ့ဖို့ကမျြးစာအငြင်းခုံလုပ်, ဘယ်လိုနေကြတယ်ကျွန်တော်မှန်သည်အဘယ်သူသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်? အဘယ်သူသည်မှန်ကန်စွာသမ္မာကျမ်းစာပြန်ဆိုဖြစ်ပါတယ်, အ authentication တမန်တော်လမ်းအတွက်?
လက်ဇန္ဒြီးယား၏ Clement, ဥပမာအားဖြင့်, တတိယရာစုအစမှာ wrote, “တယောက်တည်းဒီမိခင်နို့မပါဘဲခဲ့, သူမတယောက်တည်းနေတဲ့ဇနီးဖြစ်လာမပြုခဲ့သောကြောင့်,. သူမသည်အပျိုကညာနှင့်မိခင်နှစ်ဦးစလုံးတပြိုင်နက်ဖြစ်ပါသည်” (ကလေး၏နည်းပြ 1:6:42:1).
Clement ရဲ့ကျောင်းသား, အရင်းအမြစ်, ကရာစု၏ပထမဦးဆုံးဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း, သူက Mary အတည်ပြု “အဘယ်သူမျှမကအခြားသားယရှေုသညျခဲ့” (ယောဟနျသအပေါ်ဝေဖန် 1:6). တခြားနေရာ, သူရေးသားခဲ့သည်, “ထိုအခါငါသညျယရှေု chastity အတွက်ပါဝင်ပါသည်သောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်၏လူတို့တွင်ပထမဦးဆုံးအသီးကြောင်းကိုအကြောင်းပြချက်နဲ့အညီကြောင့်ထင်, နဲ့ Mary အမျိုးသမီးများအကြားခဲ့; သူကသူမ၏ထက်အခြားမည်သည့်ရန်အပျိုစင်၏ပထမဦးဆုံးအသီးကိုဆောင်ခဲ့ဖို့ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းကြဘူးများအတွက်” (မဿဲအပေါ်ဝေဖန် 2:17).
သူ့အဘို့မိမိအအလွန်အကျွံချီးမွမ်းခြင်းကိုနှင့်အတူ, Athanasius (ဃ. 373) အဖြစ်ကမာရိဖော်ပြခဲ့ “အစဉ်အဆက်-အပျိုစင်” (အ Ariane ဆန့်ကျင်သုတ် 2:70).
အကြောင်းခုနှစ်တွင် 375, Epiphanius စောဒကတက်, “သန့်ရှင်းသောဘုရားကိုမာရိ၏နာမတျောအားဟောပြောဖို့မလျှောက်ဝံ့တဲ့သူဆိုမွေးမြူရေး၏မည်သူမဆိုအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့, နှင့်မေးခွန်းထုတ်ခံရ, ချက်ချင်းထည့်ပါဘူး, '' အပျိုကညာ?''” (Panarion 78:6).
“အကယ်စင်စစ်,” ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Siricius အတွက် wrote 392, “ကျွန်တော်တို့သငျ့ရိုမာရိရဲ့သားသမီးများ၏ရမှတ်အပေါ်သူ့ကိုအရှက်ခွဲသအတွက်ဿုံတရားမျှတခဲ့ကြောင်းများကိုမငြင်းဆိုနိုင်, သငျတို့သညျအခွားကလေးမွေးဖွားခရစ်တော်သည်ကိုယ်ခန္ဓာသည်နှင့်အညီမွေးဖွားခဲ့သည့်အနေဖြင့်တူညီသော Virgin အမိဝမ်းထဲကနေထုတ်အံ့သောငှါအတွေးမှာတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခံရဖို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းခဲ့” (Anysius မှပေးစာ, သက်သာလောနိတ်၏ဆရာတော်).
Ambrose အတွက် commented 396, “သူမ၏တုပပါ, သန့်ရှင်းသောမိခင်များ, သူမ၏သာချစ်သူတို့သားတော်၌အဘယ်သူသည်ပစ္စည်းကိုသီလ၏ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဥပမာတစ်ခုထွက်သတ်မှတ်ထား; သငျသညျခြိုသားသမီးကိုလည်းမများအတွက်, မကညာအခြားသားကိုဘွားနိုင်ဖြစ်ခြင်း၏သက်သာရှာခဲ့သလဲ” (အက္ခရာများ 63:111).
Hippo ၏သြဂတ် (ဃ. 430) မှတ်ချက်ချ, “တစ်ဦးကဗာဂျင်းအထင်သည်အထင်မှား, တစ်ဦးအပျိုစင် bearing, ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ဦးအပျိုစင်, တစ်ဦးအပျိုစင်ထွက်ဆောင်ခဲ့, တစ်ဦးအပျိုစင်စဉ်အမြဲပြုရသော. အဘယ်ကြောင့်သင်ဤမှာတွေးမိကြဘူး, အချင်းလူ? ဒါဟာအရှင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးခံရဖို့ဘုရားသခင်အဘို့သင့်လျော်ခဲ့, သူကလူတဖြစ်လာရန် deigned အခါ,” (တရားဟောပွောခကျြ 186:1).
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလီယိုမဟာကြေညာ 449, “သူကသူ့အပျိုစင်မိခင်၏အမိဝမ်းအတွင်းသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏ပဋိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ်. သူမသည်အပျိုရည်၏ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲသူ့ကိုထုတ်ဆောင်, သူမဟာသူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲကိုယ်တော်ကိုပဋိသန္ဓေပင်အဖြစ်” (အိုတိုမီ 28). တခြားနေရာတွေမှာလည်းပုပ်ရဟန်းမင်း wrote, “တစ်ဦးအပျိုစင်ပဋိသန္ဓေ ယူ. များအတွက်, တစ်ဦးအပျိုစင်ထွင်းဖေါက်, သူမကျန်ရစ်ပြီးအပျိုစင်” (ထိုသူငယ်တော်ဖွားမြင်၏ပွဲအပေါ်ဒေသနာ 22:2).
ကြည့်ရှုပါ “အဆိုပါဘုရားကျောင်းအစဉ်အဆက်ကညာ '' အဖြစ်မာရိသည် Presents;''” L'Osservatore Romano, အင်္ဂလိပ်အပတ်စဉ် Edition ကို, စက်တင်ဘာလ 4, 1996. ↩
“ဒီဆန့်ကျင်တစ်ဦးအငြင်းအခုံ, သော်လည်း,” ကားလ် Keating လေ့လာ, “ဂျိမ်းတခြားနေရာဖြစ်ပါတယ် (တန်ချိန် 10:3) အာလဖဲ၏သားအဖြစ်ဖော်ပြ, သောမာရိကိုဆိုလိုပေ, အကြင်သူသည်သူမကခဲ့သည်, Cleophas နှင့်အာလဖဲနှစ်ဦးစလုံး၏မယားခဲ့သည်. တစျခုဖြေရှင်းချက်သူမတစ်ချိန်ကမုဆိုးမခဲ့ကြောင်း, ထို့နောက်နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့. ပိုများသောဖြစ်နိုင်အာလဖဲနှင့် Cleophas (ဂရိ Clopas) တူညီတဲ့လူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း, အာလဖဲ၏သားအဘို့အ Aramaic ကိုနာမတျောကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာဂရိပြန်ဆိုနိုင်ကတည်းက, အာလဖဲ၏သားသို့မဟုတ် Clopas အဖြစ်လည်းကောင်း. နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေအာလဖဲကသူ့ဂျူးလူမျိုးနာမတော်ကိုဆင်တူတဲ့ဂရိနာမတော်ကိုမယူကြောင်း, ရှောလုသည်နာမတော်ကိုရှင်ပေါလုယူသောလမ်း” (ကက်သလစ်ဘာသာနှင့်အခြေခံ, Ignatius Press မှ, 1988, p. 288). ↩
သြဂုတ်လ 24, 2019